हर्रो कस्तो फल हो? टर्रो स्वादको हर्रोको फाइदा जानिराख्नुस् | मेरो कलम
त्रिफला भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ? यो शब्द आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीमा खुबै प्रयोग हुन्छ । हर्रो, बर्रो र अमलाको समिश्रणलाई त्रिफला भनिन्छ । बहुउपयोगी टर्रो फल हर्रो नेपाल (पश्चिम नेपाल), भारत, श्रीलंका तथा म्यानमानमा फल्छ । हर्रोको प्रयोग कब्जियतको लागि उपयोगी मानिन्छ । यसका फाइदाहरु निम्नानुसार छ ।
कब्जियत निको पार्छ
हर्रोको फलमा चेब्यूलिनिक एसिड, टैनिन एसिड, गैलिक एसिड, ग्लाईकोसाइड्स, राल तथा संजक पदार्थ पाइन्छ । ग्लाईकोसाइड्स कब्जियत निको पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसले शरीरबाट अनावश्यक बिकार पदार्थहरु निकाल्ने काम गर्दछ । हर्रोलाई पिधेर महमा मिलाएर खानाले उल्टी बन्द हुनुका साथै कफ समेत निकाल्न मद्धत गर्दछ ।
दाद निको पार्छ
दाद निको बनाउने शक्ति हर्रोमा पाइन्छ । हर्रो र कागतीलाई मिलाएर बनाइएको लेपन दादमा लगाउदा दाद निको हुन्छ । मुखभित्र फोकाहरु आएका छन् भने पनि हर्रोको टुर्कालाई पानिमा घोटेर लगाउनाले खटिराहरु नष्ट हुन्छ । यसलाई चुसेर पनि खान सकिन्छ ।
जण्डिसको लागि पनि हर्रो निकै प्रभावकारी आयुर्वेदिक औषधी हो । करेलाको रसमा हर्रोको धुलो मिसाएर बिहान बेलुका खाने गरेमा पनि केही हप्तामै जण्डिस रोग निको हुन्छ । पानीमा भिजाएको हर्रोलाई चपाएर खाने गरेमा पेट सफा हुनुका साथै ग्याष्ट्रिकको समस्या पनि कम हुन्छ । पोलेको हर्रो बेलुका सुत्ने समयमा खाएमा छातिको कफ निकाल्न समेत उपयोगी छ ।